M n'aka na ị na nụrụ na ị chọrọ ikpochapụ kuki na gị iPhone mgbe a na mgbe. Otu n'ime ndị kasị mkpa mere ị ga-achọ ikpochapụ kuki bụ otú i nwere ike adị n'elu gị iPhone. Ọ bụrụ na ị chọpụtara na gị iPhone na-selata, ị pụrụ ịdị mkpa ka ikpochapụ gị kuki. Ekpocha gị kuki ka a otutu uru iche si dị nnọọ rụọ gị iPhone ịrụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha na-agụnye;
• Pages na gị Safari nchọgharị ga Ibu Ibu ngwa ngwa
• Downloads ga-ngwa ngwa karịa ha
• Ikpochapụ gị kuki enwekwu ohere i nwere na ekwentị gị iji hụ mma arụmọrụ ad ọzọ ohere nchekwa.
• Ihichapụ gị kuki nwekwara ebelata ọnụ ọgụgụ na ugboro ole nke nchọgharị njehie nke i nwere ike inwe.
Ugbu a na ị maara ihe mere ị chọrọ ka ihichapụ kuki na gị iPhone, ọ dị mkpa na ị na-aghọta otú ime na n'ụzọ dị irè. Ọ bụ mgbe mfe ime ya ma ọ bụrụ na ị nwere ngwá ọrụ nke ga-ekwe ka ị naanị ikpochapụ ihe ị chọrọ na-eme otú ahụ n'ụzọ dị irè na-adị mfe. Otu nke kasị mma ngwa-enyere gị aka ihichapụ kuki na gị iPhone mfe bụ Wondershare Nchekwa nchicha. Ebe a bụ ihe mere Nchekwa nchicha bụ ihe kasị mma.
•-enye gị ohere n'enweghị hichapụ ihe niile nke ozi nkeonwe gị gụnyere ichekwa ego na bank ọmụma na nbanye okwuntughe. Nke a bụ nnọọ dị mkpa mgbe ị chọrọ iji wepụ dị otú ahụ data tupu ere ma ọ bụ ịlụ Bibie ekwentị gị.
• Hichapụ niile data ị chọrọ ehichapụ ma hụ na ọ bụ unrecoverable. Adịghị ahapụ a ụzọ maka mgbake nke gị data.
• Họrọ faịlụ na ị ga-amasị ihichapụ ma ọ bụ họrọ ihichapụ dum ngwaọrụ.
• irè gwakwara elu ụfọdụ ohere ebe ị nwere ike ihichapụ ụfọdụ faịlụ na ị na-adịghị mkpa.
• ewepu niile junk faịlụ site na gị iPhone iji hụ na ngwaọrụ gị na-arụ na ezigbo etoju.
Nzọụkwụ otu: mgbe wụnye na-agba ọsọ nri version nke Wondershare Nchekwa nchicha na kọmputa gị, jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri cables. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ bụ isi window Ozugbo iPhone n'ụzọ ziri ezi ejikọrọ.
Nzọụkwụ abụọ: The ngwa ga iṅomi gị iPhone niile Safari akụkọ ihe mere eme na kuki. Safari akụkọ ihe mere eme na kuki na-ẹdude ke Private data. Ya mere, pịa "ihichapu Private Data"
Nzọụkwụ atọ: Ozugbo Doppler zuru ezu, Nchekwa nchicha ga-egosipụta niile Safari Cache, Safari History na Safari Kuki. Ka ihichapụ kuki, ego ha wee pịa on "Ihichapu ugbu a."
Jide n'aka na-na-gị iPhone jikọọ kọmputa gị site na dum usoro iji hụ na niile kuki na ehichapu kwesịrị ekwesị.
> Resource> iPhone> Olee iji Hichapụ Kuki on iPhone